Faafaahin ka soo baxday dagaal culus iyo duqeeyn habeen barkii xalay ilaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho | www.maandeeq.webs.com/
Faafaahin ka soo baxday dagaal culus iyo duqeeyn habeen barkii xalay ilaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho
Posted on January 29, 2010 by indhodeeq
Dagaal culus oo sababay dhimashada dad farabada oo rayid ah iyo dhinacyada dagaalamay ayaa degmooyin dhoor ah oo ka tisan magaalada Muqdisho uu ka biloowday habeen barkii xalay abaaro 2dii saqdhexe waxa uuna dagaalka soo gaaray aroornimadii saaka, waxaan dagaalka leeysku adeegsaday hubka culus oo madaafiic u badneeyd.
Dagaalka ayaa mar qura waxa uu hal marka ka biloowaday degmooyin badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho oo ay isku horfadhiyaan ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom oo dhan ah iyo xoogaga hubeeysan ee ka horjeeda , degmooyinka dagaalka iyo duqeymaha ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa degmooyinka C/casiis, Boondheere Shibis, Wardhiigleey, Howl-wadaag, Hodan iyo Degmada Dharkeenleey ee gobolla Banaadir.
Xoogaga ka horjeeda dowlada KMG ah iyo joogitaanka ciidamada AMISOM ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen fariisimo ciidamada dowlada iyo kuwa AMSIOM ay ku leeyihiin agagaarka bada liido, Hotel Golobol, Maanoboolyo, Debka ,Teleex Kuliyadii hore ee Jaale Siyaad, Xoosho iyo xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya oo dhoor jiho laga weeraray.
Dadka ku nool xaaafadaha dagaalka uu ka dhacay iyo saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka ay ku dhinteen ku dhowaad 15 ruux halka dhawacana lagu sheegay 25 kale kuwaasi oo ahaa dad rayid ah oo ku dhintay dagaalka fool ka foolka ah iyo madaafiicda leeysla dhacay.
Dagaalka ayaa waxa ka hadlay dowlada KMG ah ee Soomaaliy iyo xoogaga Mucaaradka, xarakada Al Shabaab iyo Xisbul Islaam oo siyaabo kala duwan kaga hadlay dagaalka ayaa waxa ay sheegeen in iyagu weerarka ay qaadeen , waxa ayna tilmaameen in guulo ay ka gaareen dagaalada xakay.
Dhanka kale Masuuliyiin u hadashay dowlada KMG ah ee Soomaaliya ee uu ka mid ahaa wasiiru dowlaha wasaarada gaashaandhiga dowlada KMG ah ee Somaaliya sheekh Yusuf maxamed Siyaad indhe cade ayaa waxa uu sheegay in kooxaha mucaardka ah ay weeraro soo qaadeen hasa yeeshee waxa uu sheegtay in ay qasaaro gaarsiiyeen oo ay rag badan dagaalka kaga dileen.
sikastaba ma jirto warar ka madaxa banaan sheegashada kooxaha Mucaardka ah iyo dowlada KMG ah ee xaqiijinya guulaha dagaalka dhinacyada iska soo horjeda ay ka sheeganayaan hasa haatee dagaalka xalay ayaa ahaa dagaalkii ugu cuslaa oo mudo bilooyin ah ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana dagaalkii xalay ilaa saaka soo gaaray uu ahaa mid madaafiica u badnaa.
« Dagaalo xalay ka dhacay Muqdisho Madaxweyne Sheekh Shariif oo maanta Ka safray muqdisho »